Nabadoon Nuur Xirsi Xuseen oo u dhintay dhaawicii ka soo gaaray weerarkii lagu qaaday. – Radio Daljir
Galkacyo, Mar 31 – Nabaddoon Nuur Xirsi Xuseen ayaa allaha u naxariistee waxa uu aroortii khamiista ku dhintay Isbitaal ku yaal magaalada Gaalkacyo halkaas oo looga dawaynayay dhaawac halis ah oo ka soo gaaray weerar khaarajis ah oo lagu soo qaaday.
Nabaddoonka ayaa allaha u naxariistee waxa uu tan iyo 29-kii bisha ku jiray xaalad miyir-beel ah kadib markii ay rasaastu ka haleeshay madaxa, taasoo khasaare ballaaran u gaysatay maskaxda.
Talaadadii ay bishii March 29-ka ahayd ayaa ida la xaqiijiyey nabadoonka waxaa rasaas ku furay 2 nin u hubaysan mar uu ka soo baxay gurigiisa oo ku yaal xaafadda Garsoor ee magaalada Galkacyo; waxaa uu nabadoonku ku sii jeeday masjidka si uu salaadda cishaha ugu soo tukado.
Inkasta oo ay magaalada indhawaale ka socdeen howl-gallo dhinaca amniga ah, misana ciidamada ammaanku kuma ayan guulaysan in ay joojiyaan dilalka loo geeysanayo nin-doorka magaalada isla markaana ay soo qabtaan dadka gaysanaya gabood-fallada.
Magaalooyinka Gaalkacyo iyo Boosaaso oo kuwa ugu waawayn Puntland ayaa waxa ka socda ugaarsi aad u ballaaran oo lagu hayo indheer-garadka, cuqaasha, nabaddoonada iyo mas’uuliyiinta dawladda, gaar ahaan kuwa sharciga iyo fulinta sharica.
Todobaadkii hore ayaa Galkacyo lagu dilay Alle ha u naxariistee nabadoon Xuseen Cali Dude, halka magaalada Boosaasona lagu dilay nabaddoon Axmed Saalax Caynab.